तपाईं आफ्नो तस्वीरहरू प्रकाशित गर्न चाहनुहुन्छ? त्यसपछि तपाईं यहाँ हुनुहुन्छ!
कला प्रदर्शनी | कला विविधता
निजी कलाको लागि प्लेटफार्म
कला विषयको बारेमा थप पृष्ठहरू
स्पाइरेस्टले उनीहरूको ससुरालो ध्वनि प्रभावको केही कुरा गर्दैनन्। केवल जब एक व्यक्ति व्यक्ति पक्षीको रूपमा सेस्लेको व्याख्या गर्दछ। त्यसपछि हामी विश्वास गर्छौं कि चराहरूले हाम्रो लागि खुसीसाथ र स्वैच्छिक रूपमा गाउछन्। चुरोट आवाज फ्लाइङ्ग जनावरहरूबाट अनौपचारिक आवेगहरू बाहिर पर्दछ।
कला के हो?
यो कला कुन प्रश्न हो भन्ने प्रश्नको सत्य हो। यस प्रश्नको जवाफ दिन, यो तीन केन्द्रीय अवधारणाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न सजिलो हुन्छ: रिश्ते धारणा - संस्कृति।
कला कि मान्छे एक निश्चित वस्तु मार्फत एक-एक साथ सम्पर्कमा आउँछ। यस प्रक्रियामा जारी विचारहरू र भावनाहरू एक साधारण विनिमय कक्षामा जान्छ। यसले एक प्रकारको सोच र बजार महसुस गर्छ।
एक चित्रकारी, एक चलचित्र वा ओपेरा प्रदर्शन प्रति कला छैन। पहिलो, तिनीहरू शुद्ध उत्पादनहरू हुन्। केवल जब कम्तिमा एक व्यक्ति - जो सिधै विकास प्रक्रियामा संलग्न छैन - तिनीहरूलाई व्याख्यात्मक रूपमा बुझ्दछ। त्यसपछि एउटा वस्तु कला हुन्छ।
विदेशी धारणाको यस पल मा, यो उत्पादन यसको 'उत्पत्ति कोकोन' को बाहिर अपरिचित केन्द्रापसारक बलों को वस्तु हो। यसले मानसिक संघर्षको एक बल क्षेत्रलाई प्रकट गर्दछ, निर्माताहरूको अवधारणात्मक र प्रभाव त्रिशूभन्दा बाहिर।
कलाको काम औपचारिकताहरू र तर्कद्वारा कुनै पनि विवेक हो। कला शुद्ध मानव धारणा अराजकता मा रहछन। कलाको कामबाट बजार उत्पादनहरू कुन कुराले भिन्नता सुरु गरेको हो।
एक शक्तिशाली जादूगरनी जस्तै, चित्रकारीले तपाईंलाई यसको पखेटामा लिन्छ र तपाईंसँग टाढा राख्छ। फर्डिनान्ड विक्टर युग्ने डिलैक्रोक्स (1798 - 1863)
जबकि दैनिक रोजगारी वस्तुहरु लाई बजार को मार्केट मार्केट मा ल्याईएको छ, एक कला वस्तु कुनै पनि उद्देश्य को अधीन छैन। यो साहस चाहिन्छ कि यसको आफ्नै निश्चित अवस्थामा मौलिक रूपमा असक्षम रहन्छ।
कला कुनै पनि तर्कसंगत झुण्डको अधीनमा छैन। यो सार्वजनिक स्थान प्रदान गर्दछ जहाँ मान्छे आफ्नो गुमनाम रहन सक्छन्। तिनीहरूलाई बिना सामाजिक बहिष्कारको पीडा महसुस गर्न।
कलाको टुक्रामा क्लिक गर्नाले कलाकारको फरक पृष्ठ खोल्छ:
चित्रकारी सुरु गर्नुहोस्
सार सार कला के हो?
Bodypainting - शरीर मा कला
मंगस - कला र हास्य
के तपाईं आफ्नो कलाकृति संग आफ्नो पृष्ठ चाहानुहुन्छ? त्यसपछि हामीलाई लेख्नुहोस्.
बारबेक्यू - सुन्दर व्यञ्जनहरु को विविधता
कला प्रदर्शनी | कला
चित्रकारी सुरु गर्नुहोस् कला
Bodypainting | शरीरमा कला
मंगस - हास्य कला मंगा